Xildhibaanadii Mooshinka ka geeyay Gudoomiye Jawaari oo sheegay in uusan burin Mooshinkaasi - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaanadii Mooshinka ka geeyay Gudoomiye Jawaari oo sheegay in uusan burin Mooshinkaasi
Xildhibaanadii Mooshinka ka geeyay Gudoomiye Jawaari oo sheegay in uusan burin Mooshinkaasi
Muqdisho (Caasimadda Online) – Xildhibaanada Mooshinka ka geeyay Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ka hor yimid go`aankii ka soo yeeray Gudiga Badbaadada Golaha shacabka ee ku aadanay in uu jabay ama buray Mooshinka ka dhanka ahaa Gudoomiye Jawaari, kaas oo ay u cuskadeen buriddiisa in uu dhaafay waqtigii 10ka maal mood ahaa ee loo madalsanay in lagu dhameeyo muranka iyo is qab qabsiga la xariira arimaha Mooshinka, basle uu dhaafay waqtigaasi isla markaana uu yahay mid Buray.
Sidoo kale Xildhibaan Maxamed Cumar Dhalxa oo ka mid ah Golaha shacabka Soomaaliya ayaa sheegay in Xildhibaannadii xalay ku shiray Muqdisho ee sheegay in uu bur buray mooshinka ka dhanka ah Jawaari ay ka mid ahaayeen xildhibaanno ka mid ah aqalka sare.
Xildhibaan Dhalxa oo wareysi siiyay Idaacadda Mustaqbal ayaa isweydiiyay goorta la isku daray xildhibaannada labada aqal ee Golaha aqalka sare iyo kuwa shacabka ee xalay halmeel wada fadhiyay.
Waxaa uu sheegay in Dastuurka dalka lagu xadgudbayo islamarkaana ay taas keeni karto in Booliska iyo Taraafikada oo isku milma sidaas darteedna loo baahanyahay in laga waantoobo.
Aqalka sare ayuu sheegay in uu leeyahay xeerar u gaar ah waxaana uu ku tilmaamay faragelinta lagu hayo golaha shacabka gaar ahaanna xildhibaannada aqalka sare.
Xildhibaanku waxaa uu Guddoomiyaha Golaha aqalka sare ugu baaqay in uu xildhibaannadiisa cishto haddii ay dhici weysana ay imaneyso in marka iyaga ay is qabsadaan ay faragelin ku sameyn doonaan kuwa Golaha shacabka.